१० मंसिर २०७७ बुधबार Wednesday, November 25, 2020
KATHMANDUTemperature 16°CAir Quality166
“तिमी लेखक, पत्रकारहरू दिमागमा पट्टी लगाएर हाम्रो बेइज्जत गर्छौ । हामीले खोलो भएकै बेला त्यहीँमाथि पुल बनाएको हुन्छ, कालान्तरमा खोलाले बाटो बदलेर पुल अन्तै पुग्यो भने हाम्रो के दोष ?
१५ मंसिर २०७६ आइतबार
प्रधानमन्त्री ओलीजीले विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने वा खराब काम गर्ने ठेकेदारलाई कडा कारबाही गर्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिएपछि अबचाहिँ यिनीहरू फेला पर्ने भए भन्ठानेको त उल्टै बालुवाटारमै धर्ना बस्न पो थालेछन् । यही बेला एक ठेकेदार मित्रसँग चिया दोकानमा जम्काभेट भयो । कुरैकुरामा मैले भनेँ, “के हो ठेक्दारसाब, आफैँ काम नगर्ने, आफैँ धर्ना बस्ने ? खराब काम गर्नेलाई कारबाही गर्नै नपाउने माग राखेर पनि धर्ना बस्न सुहाउँछ ?”
मेरो कुरा सुनेर मुखमै पुर्‍याएको चियाको गिलास टेबुलमा बजार्दै मतिर फर्किए र चर्किन थाले, “के ठेक्दार ठेक्दार भनेको ? निर्माण व्यवसायी भन्न आउँदैन ? अझ राष्ट्र निर्माता भन न ! राष्ट्र मात्रै होइन, हामी त विश्व निर्माता हौँ । संसारभरिकै हेर्नलायक संरचना बनाउने हामी नै होइन ? ठूल्ठूला भवन, राजमार्ग, पुल, स्कुल, हाइड्रो, रेल, हवाईमार्ग, सुरुङमार्ग, स्मारक कसले बनायो ? हामी थिएनौँ भने यो संसार अहिलेसम्म ढुंगे युगमै हुने थियो ।”
“हरेक चौबाटोमा सालिक स्थापना गरेर पूजा गर्नुपर्ने राष्ट्र निर्मातालाई कालो सूचीमा राख्ने कानुन बनाउँछ सरकार । मुलुकलाई युगौँसम्म अविकसित राख्ने नेताहरू, प्रशासकहरूलाई चाहिँ कालो सूचीमा राख्नुपर्दैन ? हाम्रो माग छ, राष्ट्र निर्मातालाई कालो सूचीमा राख्ने कानुन तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ । हाम्रो रोजीरोटी खोस्ने गरी सरकारले स्थापना गरेको निर्माण कम्पनी विघटन हुनुपर्छ । निर्माण गर्ने काम सरकारको होइन, हाम्रो हो । त्यस्तो कम्पनी खोल्ने अधिकार हाम्रो मात्र हुनुपर्छ ।”
“समयमा काम नसकिनुमा ठेकेदारको होइन, सरकारको पनि दोष छ । कर्मचारीले गोजीभरि कमिसन नपाई फाइल अघि बढाउँदैनन् । मन्त्री, नेता, कार्यकर्ता, डन, गुन्डा सबका सब मुख बाएर बसेका हुन्छन् । हजार झन्झट पार गरेर काम हात परिहाल्यो भने काम गर्ने कामदार पाइँदैन । सरकारले देशमा रोजगारी नदिएर सबै कामदारजति विदेशतिर गएका छन् । यो हाम्रो कमजोरी हो ?”
“तिमी लेखक, पत्रकारहरू दिमागमा पट्टी लगाएर हाम्रो बेइज्जत गर्छौ । हामीले खोलो भएकै बेला त्यहीँमाथि पुल बनाएको हुन्छ, कालान्तरमा खोलाले बाटो बदलेर पुल अन्तै पुग्यो भने हाम्रो के दोष ? विदेशतिर देखेका छैनौ, हुन्डरीले घर भत्काएको, गाडी उडाएको ? अनि हुरीबतासले पुल लडायो भन्दा नपत्याउने ? सरकारले असारको झरीमा हतारहतार बजेट सक्न पिच गराउँछ अनि पिचलाई कार्पेटजस्तो पट्याएर फोटो खिचेर हामीलाई नै सराप्छौ । धेरैतिर बजेट बाँडचुँड गर्नु परेपछि काममा थोरबहुत लटरपटर हुन्छ अनि केही कमसल निर्माण हुनु कुन अधर्मको कुरा भयो ? नेताहरू त जोगी हुन राजनीति गरेको होइन भन्छन्, हामी त नाफा कमाउनैलाई ठेकेदार भाको होइन ?”
“हामी कति अपमानित भएर बाँच्ने ? हुँदाहुँदा हाम्रा ठेकेदार साथीहरूको तस्बिर ढेडुबाँदरसँग जोडेर रूख–रूखमा झुन्ड्याइएको छ । राष्ट्र निर्माताको यस्तो अपमान हुँदा पनि सरकार मौन छ । त्यस्तो गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नु पर्दैन ? उल्टै हामीलाई कारबाहीको धम्की दिने ? यस्तो असह्य स्थिति भएपछि धर्ना नबसेर के सरकारको जयजयकार गर्ने ? हेरिराख, यसपालि पनि हामी सरकारलाई घुँडा नटेकाई छाड्ने छैनौँ । म हिडेँ, तिम्रो चिया तिमी नै खाऊ ।”
यति भनेर उनी पाखुरा सुर्कंदै धर्ना बस्न हिँडे । म त हेर्‍याहेर्‍यै भएँ ।
अब हामी त्यता वरपर गस्ती गर्छौं । ढुंगाहरूमा लठ्ठीले हानेर आवाजहरू निकाल्छौँ, सुसेल्छौँ । ...
सुत्‍न दे इन्डिया !
स्रोतले कति पटक बिहान माधव नेपाललाई र दिउँसो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइसक्यो । साँझमा प...
यस्ता अद्‍भुत समाचार मित्रहरूले कहाँबाट ल्याउँछन् ?
हामीले पूरा नहुने आशा गरेर आफ्नो स्वास्थ्य बिगार्नुभन्दा पूरा हुने सम्भावना भएका अपेक्षा ग...
नयाँ वर्ष नयाँ आइडिया
नेपालमा भने कोरोना नियन्त्रणको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले होइन, गृह मन्त्रालयले लिएजस्तो...
प्रहरी लगाऊ, कोरोना भगाऊ !
यो समय त नाकमा मास्क, आँखामा कालो चस्मा र कानमा ठेडी लगाएर चुपचाप घरमा बस्‍ने समय हो ।...
त्यत्तिकै भ्रष्टाचार भयो भन्‍ने ?
बाइकवालाले फुऽ गरेको त मापसे पोजिटिभ देखियो । ट्राफिकले समाइहाले । तर बाइकवालाले भने, ‘माप...
लोकल स्यानिटाइजरको प्रभाव